eminyakeni embalwa kuphela ethile edlule abantu kuphela baphupha mayelana nendlela ukuhlukanisa phakathi izifundo kanye netintfo ebumnyameni. Kuze kube manje, leli thuba kwaba kuphela izilwane nezinyoni. Kusukela intuthuko entuthukweni yezobuchwepheshe kanye umkhakha ukuzivikela bebonke, le nkinga yaxazululeka ngokwakha imishini ekhethekile namathuluzi ukusebenza ebusuku. Ngakho sidalwe emehlweni embonweni wasebusuku. Kuyini lokhu? Futhi indlela ukukhetha yona?
incazelo ajwayelekile embonweni wasebusuku izikophu
Okubonwayo ngoba embonweni wasebusuku - idivayisi wosayizi omncane, benesimo monoculars. Zivame ukufakwa imishini ephathekayo, ezifana izikhali, ukuze kube lula sokudubula eqondile ebumnyameni.
Naphezu kweqiniso lokuthi mikhiqizo abe ukubukeka elula, ngaphakathi bayizimpisi eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Ngokwesibonelo, embonweni wasebusuku nokuzwa okuzingela aqukethe izakhi yokusebenza elandelayo:
IR ukukhanya (amaza okushisa);
electro-optical Converter (izimpahla zabo);
umzimba kanye eyepiece.
Ukubuka kwasebusuku emehlweni ithuluzi optical esetshenziswa ukuqhuba umlilo okuhloswe kusuka izikhali ezincane ebusuku. Lezi amadivayisi kungaba ngokuphelele ebusuku futhi ube ezimbili (futhi wasebenzisa imini nobusuku), ngisho kathathu isabelo (isicelo usuku lapho kuhlwa nobusuku). Futhi, imishini efanayo kungenziwa amelwe ngesimo Imibhobho esemzimbeni for standard telescopic emehlweni.
Idivayisi ngokuvamile ukukhwezwa ngqo phezulu isikhali ngokuvumelana eksisi umgqomo. Sebenzisa lesi simanga ngesikhathi sempi ukuzivikela, ukuvikela izinto azungezwe, esimweni sniping khava.
On siphi isimiso isebenza kudivayisi ebumnyameni?
Umgomo we operation zedivayisi ngoba embonweni wasebusuku, embonweni wasebusuku, noma indlela efingqiwe yokubhala igama, ukuthatha ukukhanya kubonakala kusukela into bese ngokuphindaphindiwe okwandisa ke. Kulokhu, umthombo wokukhanya kungaba okuthunyelwe isibani, fluorescent, besibhakabhaka esinezinkanyezi noma inyanga egcwele.
Inqubo ngokwaso zedivayisi okulandelayo: ukukhanya kubonakala kusukela umthombo wokukhanya idluliselwa emehlweni lens, bese ngokushesha kabusha Converter (EOP); isinyathelo esilandelayo yintuthuko amaningi idivayisi ukukhanya okuholela kanye nokudlulisela ukuba iso owayebukele.
Ekugcineni ngocansi ebusuku isignali emehlweni ukukhanya icutshungulwe ngendlela ethile futhi ezidinga ezinombala ofanayo hlobo. Njengomthetho, ingqapheli ubona isithombe shades of eluhlaza.
Uma umuntu ngensimbi yomculo ngoba embonweni wasebusuku uphoqelekile ukuba asebenze ukungabi oluphelele ukukhanya, khona-ke ungakwazi njalo ukusebenzisa idivayisi esakhelwe nge ngesibani infrared. Khumbula ukuthi lezi ama-globe kagesi ukunikeza liyabonakala by iso obuka sika esikhathini eside wavelength ububanzi.
Yiziphi izinhlobo amadivaysi embonweni wasebusuku ayatholakala?
Uma kuphela uhlela ukuthenga emehlweni embonweni wasebusuku, udinga ukwazi ukuthi izinhlobo amadivaysi umbono ebusuku. Sekukonke, le mikhiqizo kungenziwa ihlukaniswe ezintathu izinhlobo:
amadivaysi esetshenziswa ukuqapha izinto ebumnyameni;
zokungcebeleka okuzingela futhi zempi;
izibuko embonweni wasebusuku.
Zonke lezi zinhlobo amadivayisi embonweni wasebusuku (ngaphandle wokuqala) ingasetshenziswa njengendlela ukuma yedwa umkhiqizo noma lihambisana isikhali. Futhi isendalini khona svetousilivayuschie kanye imaging amadivayisi ezishisayo ngoba embonweni wasebusuku. Ngenxa yalokho, idivayisi Ukukhetha kusukela ukusetshenziswa ekupheleni imishini izinhloso kanye kuzoncika ibanga lapho sihlelwe ukungena ukuxhumana ngqo into isitha noma ukubheka kwabanye.
Yiziphi amadivayisi embonweni wasebusuku?
amadivaysi kakhulu ebusuku ubufakazi isimiso yayo zokusebenza yilezi omabonakude okulingana futhi periscopes. Zisetshenziswa ngokuziphatha ezobunhloli esimweni umhlaba navigation. Noma kunjalo, azisetshenziswa ukwenza umlilo okuhloswe.
Izibuko ngoba embonweni wasebusuku: bayini?
Amaphuzu ngokungafani emehlweni sise iso obuka sika. Banamathele yisigqoko esebenzisa amabhande ekhethekile, kanjalo wakhulula ezandleni zakhe. Uma uhlela ukusebenzisa izibuko nge izikhali ezincane, kumelwe uthenge idivayisi ekhethekile sextant, njengoba ngokuvamile wasebenzisa laser infrared.
Leyo mikhumbi ezahlukene zokungcebeleka?
Wonke amamodeli we nokuzwa ingase yehluke kuye ngesistimu umenzi kanye idivayisi uya khona. Ngokwesibonelo, bangase babe ezahlukene electro-optical converters. Ikakhulukazi, umehluko itholakala izici ezifana isixazululo kanye nozwela cathode, futhi uma sicabangela imvamisa ensimini.
Ngaphezu kwalokho, ebusuku umbono emehlweni kungaba optical futhi digital. Ngakho amadivayisi digital babonakala omkhulu ezingaphezu kuka-optical, elinesimo othole ububanzi, a eliphezulu ukuthola uhla, ezingaphezu kwezintathu izinhlobo zeroing izilungiselelo reticle. Optical - nokuzwa kukhona icwecwe ne kaningi ezincane, okungase benawo ezengeziwe digital twilight okukhanyisa, kanye gyroscopic uhlelo ezenzakalelayo off bese uvula backlight.
Ngakho, uhlobo emehlweni, umakhi nezici obusebenzayo umkhiqizo kanye kuzoncika izindleko zawo.
Kulokho izici ukuba banake?
Ngokukhetha isikhathi digital ebusuku emehlweni uqaphele inketho okunjalo kubalulekile, isiginali / umsindo (S / N). Lokhu value evumela ukuba bagcine isihloko ehlosiwe ekukhanyeni ezindaweni ongaphakeme futhi ngaphandle kokuguqula isithombe. Esikhathini onobuhle eziphambili kakhulu, lesi silinganiso imiswe ngesilinganiso kusuka 3.5 futhi kufika ku-36 Ngokuvamile, kufanele ukhethe imodeli lapho izinga hhayi ngaphansi kuka-20.
Iphuzu elibalulekile yesibili kukhethwa mbukwane imvume. Ngokuvamile, it is kuboniswe ku-ngazimbili lemali milimitha (LP / mm) ngamunye, nokuthi inquma isilinganiso ukwahlukana imvamisa yesithombe ngocansi. Ngokwesibonelo, isithombe izinga okusezingeni lingadlulisela ebusuku digital umbono ububanzi isinqumo 30 futhi 70 LP / mm.
Esesithathu esibalulekile - lizinga ukuzwela ulinganiswa ca / LM. Lesi sici ichaza ethile ubuhlobo imingcele zezinombolo asethwe apharathasi kusukela ukuchayeka langempela.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi umbono izikophu ebusuku ingase yehluke kuye ngesistimu uhlobo a izimpahla zabo ukusebenza. Ziyakwazi mina nami +, II futhi II + futhi III isizukulwane.
amadivaysi Ubusuku GO mina nami + isizukulwane
Imikhiqizo GO mina isizukulwane akubizi. Amadivayisi anjalo kungase kuhlanganise, ngokwesibonelo, izibhamu. Ngaphezu kwalokho, amadivaysi ebusuku isizukulwane sokuqala eyenzelwe zokudubula ilitshe bekude emifushane (kufika ku 80-150 m). Basuke izimpawu izici ezilandelayo:
ukutholakala definition esithombeni kuphela phakathi;
isithombe ukuhlanekezela emaceleni;
khona isinqumo elincane.
Isibonelo esimangalisayo imikhiqizo efana Ubusuku emehlweni "DEDAL" 180 HR (100). Le modeli ifakwe umzimba wensimbi-Ceramic eqinile futhi uphelele ukusetshenziswa ne smoothbore inganono.
Izinzuzo zalesi ekilasini ungabahlukanisa wentengo okungabizi. Kulaba minuses - nozwelo ukukhanyiselwa komkhawulo ongakhetha.
imishini isizukulwane mina + has Inokucaca. Kuthathwa ezinamandla kakhudlwana futhi eyizingqabavu fiber-optic washers, okuyizinto amadivayisi input bese okukhipha. Nakuba onobuhle ezifana bavame ukuba intengo ephakeme kunaleyo isizukulwane mina isithombe intensifier tube, bakwazi ukubhekana ukuvikelwa ngokukhethekile kusukela ukukhanya ehlangeni. Ngokwesibonelo, amadivayisi zibala Pulsar (ubusuku emehlweni).
amadivaysi Ubusuku isithombe intensifier II futhi II + isizukulwane
amadivaysi lesibili isizukulwane ezibhekwa uhlobo umhlabathi ophakathi phakathi kwamanye amadivayisi e-range yomkhiqizo. Yingakho kukhona ethandwa kakhulu phakathi abazingeli amateur abanale abanye okuhlangenwe nakho lokudubula okuhloswe. Inzuzo enkulu yale imishini ukuthi ingasetshenziswa ukwenza umsebenzi, ngisho nalapho engekho kulolo nalolo hlobo ukukhanyisa.
Futhi, lezi amadivaysi isihambile beso izihlungi iqhaza ukwanda amathathu- futhi kahlanu e into iphenywe. Ngaphezu kwalokho, amadivaysi ebusuku isizukulwane bakwazi ukuhlukanisa ngokuningiliziwe esihle ngal womuntu kusuka ibanga 250-300 m.
amadivaysi Generation II + abe inketho ewusizo ngenxa yokwanda ukukhanya izici ekushayweni. Njengoba umkhuba ubonisa, amadivayisi yalolu hlobo babe ukuzwela ephakeme kanye lesinqumo high image, ngakho avame ukusetshenziswa lapho abasebenza Kwezivulekile. Ngokwesibonelo, amadivayisi zibala ebusuku umbono emehlweni iSentinel kanye model yayo G2 + 3x50, 3x50 G2 + MD nabanye.
amadivaysi Ubusuku GO Generation III
Okubonwayo ngoba oyisizukulwane sesithathu embonweni wasebusuku amadivayisi basonta okhokhelwayo. Sinenkosi eziningana ongakhetha bakusite adlulisele ukucaciseleka ekubukeni imibala kanye shades. Amadivayisi yalolu hlobo kungukuthi kuhambisana ukusetshenziswa ezindaweni ezisemadolobheni, ngakho basuke kabanzi ukutakulwa kuchazwe ku-Kwezivulekile. Isibonelo esimangalisayo izinkampani ezikhiqiza zinsizakuphila kuyinto Yukon. Ebusuku umbono mbukwane abulawe yayo has eliphezulu futhi has ukusebenza high.
Okufanele ayicabangele lapho ekhetha emehlweni?
Ukukhetha emehlweni ngoba embonweni wasebusuku, kubalulekile ukuba acabangele umehluko wemisindo nemiqondo yamagama efana ukucaciseleka yesithombe ngocansi. Futhi-ke, le sobala azoboniswa ukuqapha into esibukweni, kuba lula ukuba kungaziwa ukuthi kwakuyisifo sini. Into yesibili uqaphele - ukukhanya ezingeni yesithombe. Esesithathu iphuzu elibalulekile ukuhlola amandla nokuqina kwayo ukusebenza imishini.
Ngokulandelayo, sinake kungenzeka approximating isithombe inqubo ukusebenza iyunithi. Ngokwesibonelo, kungase kube amathathu- noma amane-emhlanjini ukwanda. Futhi sibheke izici ezifana ubukhulu lens, emkhakheni buka nekwehlwaya engela, ukugxila, isisindo futhi izinhlangothi. Ngaphezu kwalokho, funda, ngokukhetha embonweni wasebusuku emehlweni, ukubuyekezwa. Ngokwesibonelo, izifiki eziningi zaphambuka ukujabulela izinto isizukulwane sokuqala. izingqapheli ongumpetha we umcibisholo bese ukhetha imishini Generation II, II + futhi III.
Ngaphezu kwalokho, sisondela bathandile emehlweni onobuhle ukubuza izici nezici zedivayisi. Ikakhulukazi, nokuzwa eziningi afaneleka kuphela uhlobo oluthile kwezikhali.
Futhi, uma ufuna ukuhlola in umkhuba amakhono wangempela idivayisi, ungahlala ukusebenzisa isevisi umculo othandwayo namuhla - Hlola. Ngenxa wakhe, ungakhetha 2-3 amamodeli we izinto ziye kubo ihlolwe amasonto amabili.
Ekuphetheni, sithi ngiphakamisa emehlweni, udinga ukuba acabangele imigomo yokufuna yayo, isimo sezwe kanye neminye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama.
Indlela yokulawula quadrocopter: ongakhetha elawulwa kude, futhi ukushaja indiza yokuqala
Puppet Theatre (Sifundazwe): umlando, repertoire, qembu
Canvas - kuyini? Ikakhulukazi izindwangu, ikhwalithi imikhiqizo kanye nokubuyekeza